China Postpartum Ice Pack ifektri abakhiqizi | UHuanyi
Amaphakethe we-Gel Relief Pain Relief Reli Relief
I-29.5 * 7.5cm, i-220g, imikhono ethambile egezekayo enamaphakethe wejel ubuhlalu osebenzisekayo, okungcono kakhulu ngemuva kokukhululeka kobuhlungu bokubeletha
Ukwelashwa okubandayo kunciphisa ukuvuvukala nokunwaya, kunikeze usizo ngokushesha. Lokhu kuthuthukisa ukwelashwa kusukela ekubelethweni, ukudwengulwa kwesitho sangasese sowesifazane kanye nemithungo, ukuhlinzwa, ama-hemorrhoids, ukopha, ukutheleleka ngemvubelo, ukuhlukunyezwa okuvela ku-waxing, ukususwa kwezinwele ze-laser, noma ukulimala kwezemidlalo, phakathi kwabanye.
Ifektri yethu ingakwenzela isethi, isibonelo, amaphakethe obuhlalu be-2Xgel nemikhono engu-3X, noma ungahlanganisa amaphakethe ejeli angu-1X ngemikhono engu-2X, ukuze uwasebenzise ngokunethezeka nangokungaguquguquki.
Amaphakethe wejel enziwe ngefilimu yebanga lezokwelapha engeyona enobuthi futhi ahlala ethambile futhi eguquguqukayo lapho efriziwe, enikeza induduzo enkulu kakhulu ukuthi amaphakethe eqhwa ajwayelekile namaphakethe eqhwa esibhedlela.
Kungcono ukuwaphonsa esikhwameni sesibhedlela.
Ingasetshenziselwa ukukhululeka cishe kunoma yisiphi isitho somzimba ngemivimbo, ukuvuvukala, ukusikeka okuncane nokusha, izinhlungu zemisipha nokuqina, izinhlungu ezikhulayo, umkhuhlane kanye nokunakekelwa kwelanga. Ingashintsha phakathi kokushisa nokwelashwa okubandayo. Mane ubeke esiqandisini noma efrijini kuze kufike izinga lokushisa olifunayo ngomphumela obandayo / weqhwa. Ngomphumela wepakethe oshisayo, mane ubeke i-microwave kuma-increments wesibili angama-25 kuze kufinyelelwe izinga lokushisa elifiselekayo.
Ngabe ukhona osebenzise le postpartum ngamaphakethe endwangu? Isipiliyoni?
Ngibonga kakhulu ukuthi ngawathenga kusenesikhathi senyanga ngoba ngagcina ngithola ama-hemmorhoid futhi ngawadinga la ukuze ngiphumule izinhlungu ngalokho nangaphambi kokuba ngithole umntwana. Lezi ziba yiqhwa kahle futhi zibushelelezi uma uzikhipha, hhayi eziqinile futhi eziminyene noma ezinzima.
UTHANDE lo mkhiqizo! Ngibuya esibhedlela nengane yami esanda kuzalwa. Nginezinyembezi zesibili futhi lapho ngiya ekhaya bengingakulungele nhlobo. Ngikuyalile lokhu ngoba amaphakethe eqhwa isibhedlela asithumele ekhaya aputshuke kuyo yonke iphedi ejwayelekile. Ngafaka ama-GentlePacks amathathu efrijini futhi aqhwaqa ngokushesha. Ngiwafaka emikhonweni egezekayo bese ngiyifaka ngaphandle kwengubo yangaphansi yami futhi iqeda izinhlungu nokuvuvukala.
Langaphambilini Iphakethe Leqhwa Lamabele
Olandelayo: Ibhande langemuva elinesikhwama seqhwa
Amaphakethe e-Ice Postpartum ahamba phambili
Ama-Ice Pack Pads Ngemuva Kokuzalwa
I-Ice Packs Ye-Engorgement
Ama-Ice Pads Ngemuva Kokukhulelwa
I-Perineal Cold Pack
Amaphakethe e-Ice Birth Post
Amaphakethe we-Cold Postpartum